အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: စင်ကာပူ၏ အဦးဆုံးနေ.များ (၂)
... 1:20:00 PM
ပိုတော်ရင် office ထဲထိ ခေါ် စကားပြောတယ်..။
3 April 2009 at 7:45 PM
Your experiment is very exciting. And your friends are kind and very helpful.You are luck to have them. Let me tell you about my first day experiment in Singapore. I came here to study. Before I came to Singapore,my uncel and his friend told me that they have arranged everything for me and didnt need to worry.Becuse of what they said,I didnt inform my friends from Singapore. I came together with my uncel's friend's daughter and her frineds. I carried hand carry for them.They looked like very friendly and very nice at Yangon airport. They showed their true face at Changi airport.Her uncel and her relatives came to pick her and her friends at airport. But they left me alone at airport. They gave me 30cents to call my friends. You know I felf angry and I wanted to cry that time.Luckyly I can contact my friends.Before he came I have to wait airport around2hours.I still dont know that happened because of my fault or their fault.
I feel that this isavery good lesson to learn people. I dont trust people easily from that day onward. Am i wrong?
5 April 2009 at 11:27 AM
ကိုနေလင်း မမှားပါဘူးဗျာ ၊၊ ကိုနေလင်းအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ. အတွေ.အကြုံတစ် ခုပေါ.ဗျာ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုလူမျိုး ကိုနေလင်းထပ်မ ကြုံ နိုင်တော.ဘူးလေ ၊၊ ကြုံခဲ. ရင်တောင် ကိုယ်နားလည် သွားပြီ ၊၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုနေလင်းရဲ. ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာ ပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. အခုတော. ဒါဟာ ဟာသ တစ်ခုပေါ. နော် ၊၊ နောက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ. အသိတစ်ခု (I dont trust people easily from that day onward.) ရခဲ.တယ်လေနော် ၊၊ ဒါဟာ ဘာနဲ.မှ ၀ယ် လို. ၊ လဲလို.မရတဲ. ဘ၀ သင်ခန်းစာ ပဲ ၊၊